Death of Me – Gold Channel Movies
Video Sources 7112 Views
Horror အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားသစ်လေးကို GC ပရိတ်သတ်တို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နီးလ်အိုလစ်​ဗာနဲ့ ခရစ်စတင်းဆိုတဲ့ လင်မယားစုံတွဲဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ထွက်လာကြတာပါ။ အဲ့ခရီးစဥ်မှာ ကျွန်းဆွယ်တစ်ခုကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်းကလေးနေ မပြန်ခင်တစ်ရက်မှာ သူတို့စုံတွဲဟာ ညစာထွက်စားရင်း အရက်မူးပြီး အဲ့ညက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို မမှတ်မိခဲ့ကြပါဘူး။
သူတို့ ပြန်မဲ့မနက်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ကြေငြာချက်ကြောင့် ပြန်ဖို့ အလောတကြီးဖြစ်နေတဲ့ အိုလစ်​ဗာတို့ဟာ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးဘက်မှတ်တွေ ပျောက်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်းလေးက ထွက်ခွာမဲ့ ကြိုပို့ယာဥ်နဲ့ မလိုက်ရပဲ ဆက်နေနေခဲ့ရပါတယ်။
ညကဖြစ်ရပ်တွေကို မမှတ်မိလို့ အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့ ကင်မရာမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတာတွေမြင်တွေ့လိုက်ရပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် အဖြစ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သူတို့ အိမ်ပြန်နိုင်ကြဦးမှာလားဆိုတာကိုတော့ ဒီကားလေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။
Download ရတာအဆင်မပြေလို့ Application သုံးချင်ရင် ဒီ Page messenger မှာ လာပြောပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Download UserDrive HD ?????? 1 gb
Download UserDrive SD ?????? 500 mb
Download Mega SD ?????? 500 mb
Download Mediafire SD ?????? 500 mb
Download GDrive SD ?????? 500 mb